Akwụkwọ ozi ghere oghe nye @Jack About Twitter | Martech Zone
Ruo otu afọ ugbu a, ejiri m njakịrị kwuo na Twitter dị ka nwa agbọghọ m nwere obi ọjọọ n’ụlọ akwụkwọ nke na-agaghị enye m oge nke ụbọchị. Otu oge anyị na-egwuri egwu na-agbapụta karama ahụ n'okpuru ụlọ, ọ na-agbanye karama ahụ ka ọ susuo nwa okorobịa ahụ n'akụkụ m nke ahụ bụ jerk. O gbawara obi. O mechara mebie nke ya. Anyị abụọ tufuru. Twitter na-efukwa.
I dere n'ime gị enwetakwa oku:
Obi dị anyị ụtọ ịkọ na ojiji a na-eme kwa ụbọchị na-aga ngwa ngwa maka nkeji iri atọ na atọ n'usoro, anyị na-ahụ na mmụba siri ike na-aga n'ihu
Amaghị m onye We bụ, ma mgbe m nụrụ okwu ahụ ojiji kwa ụbọchị ojiji, Awara m anya mmiri. Na-esusu ọnụ onye ahụ. Ọ na-amịkwa n'ihi na abụ m onye hụrụ gị n'anya.
Don't naghị aga ụbọchị na-anụghị banyere Twitter.
Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ eziokwu, ka anyị gwa ibe anyị eziokwu. Nke ahụ bụ n'ihi isi okwu ahụ tweeted bu aha bu ụzọ Donald opi ruo ihe karịrị otu afọ ugbu a.
Nwoke ahụ ị na-echebaghị gabiga ókè bụ naanị ihe kpatara imirikiti ndị mmadụ nụrụ banyere Twitter na afọ gara aga. O yikwara ka nke ahụ ga-aga n'ihu n'afọ a. O siri ike onyinye nke ga - eweta Twitter n'ebube ya.
Adịghị m mbanye anataghị ikike
Anọ m na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ n'ịntanetị kemgbe mmalite ya na ahịa ọdịnala tupu nke ahụ. Anọ m na-ele anya ka akwụkwọ akụkọ na-egbu onwe ya, na-eleghara nkà nta akụkọ nke ndị na-agụ ya ji ha anya ma na-ere ya anya anya na Kupọns. Ha nwere ịhụnanya na jerk.
Emeela m nyocha siri ike ma nyefee SaaS maka ihe karịrị ijeri $ 3 na ntinye ego na nnweta. Ekwuru m (dị ka ọtụtụ ndị ọzọ mere) banyere njedebe nke isi awọ nke ụlọ ọrụ ọchụchọ. Abụ m mmalite nke uto nke ExactTarget wee nye aka ịmalite ụlọ ọrụ ọzọ na-ere na Oracle. M na-ede banyere Technology Technology kwa ụbọchị. Ana m erute.
Na m hụrụ n'anya Twitter… n'agbanyeghị na ọ naghị ege m ntị.
Etu m kwenyere na Twitter nwere ike isi gbanwee… ngwa ngwa
Ka anyị mafere ozugbo. Enwere m nkụda mmụọ na Twitter n'ihi na echere m na nsogbu ahụ esighi ike karịa ka ị na-eme. Ma n'ihi na m kwenyere na ị daala n'ịhụnanya maka ọnụ ọgụgụ na-eto eto - nke ahụ - nke na-eduga igbu onwe gị.
Ahụmahụ Twitter na-abụbu nchọpụta dị ịtụnanya nke mmadụ dị ịtụnanya, akara, ma ọ bụ ọbụna ọgụgụ isi jupụtara na mkpụrụedemede 140. Ahụmahụ a dị ka ịnwa ịme mkparịta ụka na nnukwu mosh olulu na mbara ala. (Achọrọ m iji okwu ahụ mosh olulu na isiokwu).
Na mkpọtụ na Twitter bụ adịghị akwụsị akwụsị… na ị na-eme ememme na-abawanye na nọ n'ọrụ ojiji.
Nke a bụ ihe m ga-akwado ozugbo:
Gbochie imeghari Tweets. Kwụsị ara. Na akaụntụ Twitter m, ekwesighi ikwe ka m megharịa otu tweet ahụ maka oge ọ gwụla ma m na-akwụ ụgwọ iji kwalite Tweet. Kedu ihe kpatara m ga-eji kwụọ gị ụgwọ mgbe m nwere ike ịda ụda mgbede kwa ụbọchị? Ntuziaka: Anaghị m akwụ gị ụgwọ.
Ichaji maka API ojiji kwa tweet bipụtara. Okwesighi ibu otutu… mana dika onye mbipute, aga m eji obi uto kwuo ugwo onwa kwa ọnwa ebe m nwere ike iza aka gi banyere edemede m ka umuaka m wee zaghachi. Ndị Spamm agaghị. Ha ga-apụ.
Nchaji maka ojiji #ad kwa tweet bipụtara. Ọtụtụ nde dollar na-agafe na ikpo okwu gị kwa ụbọchị na ị naghị akpata ego. O doro anya, ndị enyi m ga-akpọ m asị maka ịtụ aro a, mana m na-anwa inyere gị aka - ọ bụghị ha. Ọ ga-ebelata arịrịọ anyị, anyị nwere ike igbochi ma ọ bụ gbaa ndị spammers na-arịọ arịrịọ na-enweghị mkpado.
tinye Nweta-Na Direct Ozi. Enweghị m ike ị gaghị enyocha ndị DM m ka ha anaghị achịkwa achịkwa. Amaghị m ebe m ga-ebido, mana ọ gaara amasị m ohere ịhapụ ụfọdụ ndị ọrụ ịgwa m okwu na nzuzo. Ugbu a, ha agwakọtara na ọtụtụ puku ozi ndị ọzọ na m jụ ịlele ha.
Kwụsị iziga m ozi ịntanetị ị ga-eso Pop omenala Ihe ndekọ Twitter ndị na-enweghị isi nye m. Ọ bụrụ na ị gere m ntị (dịka m na-ele onye mụ na ya mekọrọ ihe), ị ga-amata na Kanye West na Justin Bieber bụ ndị m na-enweghị mmasị. ọ bụghị otú ọtụtụ nde ndị ọzọ si eji gị.
Ọfụiche Dị ndị mmadụ. Enweghị ọdịiche dị ukwuu, mana ọ ga-eju anya ma m nwee ike ịkọwa ihe dị iche. Enwere m ike nza na kewaa nri m n’etiti mkparịta ụka onwe na nke ọkachamara.
Makụọ ịbụ a Ahịa Ọrụ Ndị Ahịa. Ọtụtụ nde mkpesa na nyocha na-agabiga na ikpo okwu gị kwa ụbọchị ma kwaga na ụlọ ọrụ ndị na-azụta ngwaọrụ nlekota oru mmekọrịta iji jide ha. Gini mere ị naghị enye onyinye maka nke a? Kedu ihe kpatara na anaghị ewepu Twitter na kapeeti site na ngwa ndị ọzọ ma mee ya n'onwe gị? Ọ ga-amasị m nyochaa bot na saịtị m nke ga-akpado m ma bipụta ya na Twitter ka ụwa wee hụ. Ọ ga-amasị m ịhụ ka ị na-enye mmetụta na nyocha na akpaghị aka dịka akụkụ nke profaịlụ njirimara.
Biko mezie nke gi nchọta n'ime na ezughị ezu ziri ezi. Na m ga-eji saịtị: twitter.com ọchụchọ na Google iji chọta ndị mmadụ na Twitter bụ ihe nzuzu.
E nwere ya, Jack. Enwere m ezi olileanya na Twitter agaghị arapara na njigide ahụ ọ na-esusu ọnụ na nnọkọ. Kpoo uzo ojiji ma nabata aka. Ezigbo ịhụnanya Twitter na-anọdụ ala ebe a na-eche.
Psst… Kpọọ m. 😉
Tags: Donald opiJackdorsey jackopiopi na twittertweetTwitter